Guudlaawe oo ballan u sameeyay musharixiinta Hiiraan | KEYDMEDIA ENGLISH
Guudlaawe oo ballan u sameeyay musharixiinta Hiiraan
Cali Guudlaawe, oo labada maalin ee soo aaddan doonaya inuu qabto doorashada kuraasta ugu miisaanka culus Hiiraan, ayaa ballan qaad xooggan u sameeyay musharaxiinta u taagan tartarnka xildhibaanimo.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Madaxweynaha DG Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen, oo uu wehliyo MW Ku Xigeenkiisa, Yuusuf Axmed Hagar, ayaa xalay ballan qaad u sameeyay musharixiinta, kuraasta Golaha shacabka ee taalla xarunta gobolka Hiiraan.
Ku dhawaad 50 musharrax oo u baratamaya 11 kursi, ayuu Cali Guudlaawe, ku wargaliyay in uusan jiri doonin kursi loo xirayo ruux gaar ah, kadib kulan ka dhacay, hoyga uu ka deggan yahay magaalada Baladweyne.
Guudlaawe, ayaa u yeeray, musharaxiinta u taagan tartarnka xildhibaanimo ee Golaha Shacabka, kadib markii qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada, lagu arkay, ciidamo xooggan oo sheegaya in aysan ogollaan doonin doorasho xiran.
Madaxweynaha ayaa musharaxiinta u sheegay inay u diyaar garoobaan doorasho daahfuran oo si nabad ah ku dhacda, waxa uuna balanqaaday inaysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaara. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay xaafiiska Guudlaawe.
Doorashada 11-kaan kursi, ayaa la filayaa in ay qabsoonto, Isniinta iyo Talaadada nagu soo fool leh, waxaana musharixiinta u tartamaya ka mid ah, shaqsiyaadka ugu miisaanka culus siyaasadda Hiiraan, marka loo eego heer dowladda dhexe.
Agaasimihii hore ee NISA, Cabdullahi, Sanbalooshe, Wasiirkii hore ee Waxbarashada, Goodax Barre, Wasiirkii hore ee amniga Cabdirisaq Cumar, Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi iyo Xildhibaan, Aamina Maxamed, ayaa qeyb ka ah shaqsiyaadka baratamaya.
Doorashada soo fool leh, labada maalin ee soo aaddan, waxaa qeyb ka ah kursiga Soomaalida oo dhan ay indhaha ku hayaan, ee HOP135, kaas oo baarlamaankii 10-aad ay ku fadisay Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi.
HOP135, waxaa si gaar ah u beegsanaya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo, maadaama Xildhibaan Aamina, ay tahay shaqsiga dadaalka ugu badan galiyay, sidii ay caddaalad ku heli lahaayen qowska Ikraan Tahliil, oo gacanta Fahad iyo Farmaajo ku maqan.
Sidoo kale, Madaxtooyada Soomaaliya, waxa ay dadaal kasta ku bixin doontaa in la hor istaago, Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Cabdullahi, Sanbalooshe, kaas si weyn kaga soo hor jeeday Farmaajo in muddo ah.
Dhanka kale, shalay waxaa magaalada ka dhacay bannaan-bax ka dhan ah, Xidhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo ay dhigayeen, dad ka soo hor jeeda in Jeesow, mar kale ku laabto matalaadda kursiga HOP#030, waxayna ku eedeeyeen inuu danihiisa gaarka ah eegto.